Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ - Koowheel မှစ. foldable လျှပ်စစ်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာထုတ်လုပ်သူ
Koowheel မှစ. foldable လျှပ်စစ်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာထုတ်လုပ်သူ
အဆိုပါ Koowheel E1,2ဘီးလက်တန်း foldable ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်း လျှပ်စစ် Scooter ဖွယ်ရှိကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Transporter အော်တိုဖြောင့်မတ်အသေးဆုံးနှင့်ပျော့အလေးချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Koowheel မူပိုင်ခွင့်ဆန်းသစ်ဖက်ရှင်အေးမြဒီဇိုင်း, headlamps အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးအမြီးမီးခွက်ဖြစ်၏ ဘက်ထရီနှင့်လက်ရှိမြန်နှုန်းကိုပြသနိုင်သည့်လုံးဝတစ်ဦးနဲ့ LED Display ကိုမျက်နှာပြင်ရှိ၏ ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိတုန်ခါမှုကိုလျှော့ချထားတဲ့တုန်ခါမှုစွမ်းအင်ဒီဇိုင်း။
ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ် Scooter သင်တစ်ဦးကထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ရတဲ့၏စိတ်ချပါခံရဖို့လိုလျှင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ။ E1 တော်လှန်ရေးသမားမော်ဒယ်သစ်ကိုမြင့်မားတဲ့စတိုင်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုအားဖြင့်များစွာသော features တွေရှိပါတယ်:
ကလေးတွေနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအတှကျကောငျးတိုးချဲ့ကို stem, (နီ, အစိမ်း) ။
တွန်းအားပေးမြန်နှုန်း 3km / ဇရောက်ရှိသည့်အခါက Black Tech မှစမတ်စတင်;
8inch ရော်ဘာ pneumatic တာယာနှင့်အတူစူပါစျေးမှာစုပ်ယူ;
သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ခရီးစဉ်ပြောင်းလဲမှု setting များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့အခမဲ့ APP ကို;
အဆိုပါ hoverboard ထုတ်လုပ်သူ ဟာသူတို့ရဲ့ hoverboard ပို. ပို. တည်ငြိမ်စေရန်အများဆုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခိုင်ခံ့နှင့်တာရှည်ခံစေနိုင်သည် လျှပ်စစ် hoverboard ဆိုမျက်နှာပြင်သည်။ အဆိုပါ hoverboard ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲသွားတော်မူပြီ မိမိအအစီအမံ "Inventist" အောက် 2013 ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရှိန်ချန်ခြင်းဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည်။ က powerboard လေ့လာဖို့အလှနျရိုးသည်ထုတ်လုပ်သူများကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပျမ်းမျှပေါ်မှာ hoverboard အားဖြင့် powerboard run ဖို့စားသုံးသူများအတွက်5မိနစ်ကြာပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအသုံးမဝင်တော့ဒြပ်စင်အစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ refurbished ထုတ်ကုန်များဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့အသစ်များကိုအဖြစ်ကောင်းသောအဖြစ်တော်တော်များများကို run ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ဖက်ရှင်တွေနှင့်အမှတ်တံဆိပ်မှမသွားမီ, ကသင်တို့အဘို့မြျှောပျေါမှာရှိစေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကိုသိရန်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ပေသည်။ Nice, ပထမဦးဆုံးစှဲနောက်ဆုံးစှဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင် Halo Rover ထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အတူအတည်ပြုရန်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ပါပဲ။ သင်သည်သင်၏အသစ်အ handsfree segway ထဲကအများဆုံးလိုပါကပိုကောင်းသငျသညျအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှမသွား။ မြောက်မြားစွာကိုတုပနှင့်ထွက်ရှိ hoverboards ၏ချွတ်ယွင်းဗားရှင်းရှိပါတယ်။ နည်းနည်းသံသယဖြင့် hoverboard K7 ထွက်ရှိအရေးပါသောအအံ့မခန်း hoverbaords တဦးဖြစ်ပြီး, ကျိန်းသေစျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံး entry ကိုအဆငျ့ hoverboards အကြား။
အချိန် post: အောက်တိုဘာ-12-2017